Adeegyada Caafimaadka Bixiyaha - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Bixiyaha > Adeegyada Caafimaadka
Soo ogow adeegyada caafimaad ee ay heli karaan xubnuhu.
Xubnaha leh baaritaano adag ama baahiyo gaar ah, waxaan u fidinnaa adeegyo caafimaad oo kala duwan si looga caawiyo inay maareeyaan xaaladdooda maalin kasta.
Adeegyadan caafimaad waxaa lagula talinayaa bukaannada kuwaas oo Maareynta Kiisku ay yareyn karaan halista natiijooyinka xun, kuwa leh xaalado caafimaad oo qallafsan ama xaalad caafimaad ama arrimo qatar ah oo nafsaani ah.
Maareynta caafimaadka, maareynta kiisaska iyo tababarka caafimaadka ayaa lagu heli karaa qiimo la'aan. Bukaanku iskood ayey u gudbin karaan adeegyadan ama dhakhtarkooda ayaa u gudbin kara iyaga oo isticmaalaya Foomka Gudbinta Maareynta Kiiska. Fadlan fakis ugu buuxi foomka 206-642-7073 ama iimayl ugu dir nuqul iskaan ah [emailka waa la ilaaliyay].
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan adeeg kasta hoos ayaa lagu bixiyaa.
Maamulka Caafimaadka waa qeyb ka mid ah Waaxda Maamulka Caafimaadka. Waxaan la shaqeyneynaa rugta caafimaadka si aan u abuurno qorshe daryeel oo sare u qaadaya fayoobka xubinta. Kooxdani waxay ka kooban yihiin shaqaale caafimaad iyo kuwo aan daaweyn ahayn mid kasta oo ka mid ah aagagga soo socda, dhammaantoodna ujeedkoodu yahay hubinta qorshe daryeel ficil ah oo loogu talagalay xubnaha:
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maareynta Caafimaadka
Maareynta kiisku waa geedi socod iskaashi oo wax looga qabanayo shakhsiyaadka baahiyaha caafimaad ee xubnaheenna. Waxay ku lug leedahay isuduwidda adeegyada si loo aqoonsado ikhtiyaarrada kale iyo in xubnaha la baro waxyaabaha ku saabsan ilaha ay heli karaan. Kaaliyaha maareeyaha kiisku waa u doodid, qiimeyn, iyo isku dubaridka daryeelka u dhexeeya bixiyeyaasha badan iyo xubinta. Xubnaha waa in loo gudbiyaa barnaamijka maaraynta kiiska.
Barnaamijyadeena tababarka caafimaadka waxay aqoonsadaan bukaanada qaba baaritaanada joogtada ah sida sonkorowga, neefta, iyo / ama cudurka sambabaha ee joogtada ah (COPD), waxayna kaqeebqaataan inay eegaan inay ubaahanyihiin caawinaad dheeri ah. Ujeedada tababarka caafimaadka waa in la wanaajiyo tayada nolosha xubinta iyadoo laga caawinayo inay ku dheganaadaan qorshe daryeel oo waxqabad leh.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Tababbarka Caafimaadka
Bukaanka qaba baaritaano dabadheeraad ah ama baahiyo gaar ah ayaa buuxin doona a Qiimaynta Caafimaadka kahor intaadan bilaabin tababarka caafimaadka ama barnaamijka maaraynta caafimaadka. Si aad u hesho marinka Qiimeynta Caafimaadka bukaanka, fadlan la xiriir maareeyaha kiiskooda.
MA Labada Qorshe (HMO SNP): Kala-guurka Daryeelka
Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington waxaa ka go'an maaraynta kala-wareejinta dhammaan xubnaha MA Dual Plan (HMO SNP) oo ka socda xarun daryeel oo loo wareejiyo tan xigta, iyo dib ugu noqoshada guryahooda caafimaadka. Nidaamkani wuxuu nooga baahan doonaa waxqabadyada annaga iyo daryeelaha (yaasha) xaadira ee xarun kasta oo adeeg ah. Fadlan dib u eeg oo baro naftaada waxyaabaha soo socda ee ugu yar ee looga baahan yahay in la dhammaystiro mar kasta oo uu jiro xubin MA Dual Plan (HMO SNP) ah oo la qorsheeyey ama aan la qorshayn bukaan-jiifka ama dhacdada.
Waxay ka mid yihiin laakiin aan ku xaddidnayn:
Soo-koobitaan dheecaan ah
Dib u eegista liiska daawaynta ee xubinta
Dib u eegista wixii ballammo dabagal ah ee loo baahan yahay
Haddii aad qabtid su'aalo ku saabsan Qorshooyinka Faa'iidada Medicare ee CHPW ama Siyaasadaha, fadlan la xiriir Wakiilka Xiriirka Bixiyaha.